Waxabajjii 16, 2021
Hayyu Duree ABO Obbo Daawud Ibsaa, sirna simannaa ABO-f godhame irratti, Finfinnee, Fulbaana 15, 2018
Dhaabbanni kabaja mirga dhala namaaf falmu Amneestii Internaashinaal, Hayyu Dureen ABO, Obbo Daawud Ibsaa ji’ootaaf humna nageenyaa mootummaan manasaaniitti ugguramuun akka isa yaachise ibse.
Dhaabbanni Amneestii Internaashinaal haala Obbo Daawud Ibsaa Caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuun ibsa baaseera.
Ibsa ’saan Amnesty’n humnootni nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa mana Obbo Daawud eyyama mana murtii male sakatta’anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan, isaaniin ammoo manaa akka hin baane manuma isaanii keessatti to’annoo jela oolchanii jiruu jedhe. Dhaabbatichatti qorataan mirga namoomaa ka gaanfa Afriikaa Obbo Fissehaa Teklee, dhaabbanni isaanii haalli kun yaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
Obbo Fissehaan Obbo Daawud gaggeessitoota siyaasaa bara 2018, siyaasa gama nagaan hirmaachuuf biyyatti deebiyan keessaa takka, tahuu eeranii, ji’ootaan dura manasaaniitti sakatta’iinsi erga gaggeeffamee meeshaaleen akka bilbila harkaa, fi laaptoppii erga fuudhameen booda, namootni achi turanis hidhamanii jiru jedhan.
Dabalaniis ergasii gara mana isaanii dhaquun, achi keessaas gadi bahuun hin danda’amu jedhan. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda’amu, kun egaa mana isaanii keessa haa jiraatanuyyu malee akkuma hidhaatti ilaalama; kana malees himati isaanirratti banamee mana murtii hin dhiyaannee, kanaaf ibsi keenya, yookaan himati sirriin akka isaanirratti banamu, yookaan ammo akka bilisaan lakkifamani kan mootummaa gaafanne jedhu Obbo Fissehaan.
Obbo Fissehaan, obbo Daawud, bilbila waan hin qabneef, darbees karaan odeeffannoon waayeesaanii beekamu waan hin jirreef nami kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda’u kanaaf wanni kun yaaddessaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis angawoota mootummaa Itiyoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenyellee Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Lammii Gammachuu Itti gaafatamaa sabqunnamtii yeroo Adda Bilisummaa Oromooti. Humnootni nageenaya mootummaa Caamsa 3, bara 2021, mana jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenanii booda meeshalee elektirooniksii akka mobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota sadii jechuun, obbo Waaqoo Noolee, Obbo Yunuus Alii fi Obbo Siraaj Sulemaan fuudhanii deemanii haga harraa eessa buuteen namoota kanaa hin beekamuu jedhan.
Amneestii Internaashinaal ibsa isaan Obbo Daawud, waan isaan barbaachisan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta’es qorsisaanii akka duraa dhumee rakkoorra hin buune yaaddoo qabullee ibse. Obbo Lammiin dhaabni ABO haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Yoo deebii kennan shamarri duraan isaan gargaaraa turte takka waan isaan barbaachisu warra eegdotaa duuka baatee akka dhiyeessaa jirtu fageenyaan dhageenyeerra jedhan.
Haala mana Obbo Daawuditti erga Caamsa 3, bara 2021 kaasee ta’aa jiru angawoota mootummaarra odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbi himaan Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinnee Komaander Faasikaa Fantaa, dhimma kana Poolisii Federaalaa ti harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeylaan Abdoo Dubbi Himaa Koomishinii Poolisii Federaalaati; isaanis waa’ee waan mana Obbo Daawuditti ta’aa jiru akka quba hin qabne dubbatan.
“Ani waan kanaa waanin beeku ykn quba qabu hin jiru, amman sirraatii dhagahaa jira. Kanaan duras nami takka na gaafatee ture, alas Obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiin hidhamuu waanin odeeffannoo hin qabneef warra angawootaarraan odeeffadha” Obbo Jeeylaan Abdoo Dubbi Himaa Koomishinii Poolisii Federaalaa
Amneestiin ibsa isaatiin Obbo Daawud yoo yakka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka isaan dhiyeessu, tahuu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to’annaa jelatti eeguunuu seeraan alaa jechuun balaaleffate.
Ijoollee Tigraay Keessaa Kuma Heedduu Du'atu Isaan Eeggata :Tokk Mootummootaa